DTH Hammers n'ụdị dị iche iche sitere na 3 ruo 12. Hama ndị a bụ
mere nke kwekọrọ na Drilling Bits iji mezuo ebumnuche zuru ebe niile. A na -eji hama ndị a arụ ọrụ dị iche iche na -agbada oghere dị ka ịkụ ala bench. Ndị a bụ obere hammer nke nwere obere ikuku okirikiri kachasị. Ndị a bụ hama dị arọ nke na -arụ ọrụ na omimi miri emi nke na -achọ ka ikuku ikuku dị obere, na -ebute mfu arụmọrụ kacha nta. Anyị na -enye hama IR, DHD3.5, DHD340a, DHD360, DHD380, COP na hammer QL. Oghere kacha mma maka mkpọpu mgbawa na DTH bụ 90mm ruo 254 mm, a na -ejikarị obere nkpu na -agbakarị obere oghere mgbawa, nnukwu oghere na -ejikarị igwe rotary. A maara hama anyị dị ka COP na QL maka ntụkwasị obi ya na ogologo ndụ ya.
Hammer DTH bụ ngwa na -ebute ibu na -emetụta mkpọgharị rotary. Ọ na -eji ike dị na mmiri na -agbapụta agbapụta nke mgbapụta apịtị na -enye mgbe a na -egwu ala iji kpoo hama n'ime hama hydraulic ka ọ na -etolite ma na -emegharị mmegharị, na -etinyekwa oge ụfọdụ mmetụta ibu na ngwa mgbapu ala, ka ghọta mmetụta mkpọtụ rotary.
Ịgba olulu DTH bụ nnukwu mgbanwe nke mgbagharị rotary na usoro mkpọtụ ọhụrụ mgbe olulu diamond na olulu ikuku. Ọ na -eme nke ọma n'ike nke adịghị ike dị elu, ike ịkwa osisi dị ala na enweghị mmetụta nguzogide nke oke okwute siri ike. Ọ bụ teknụzụ mkpọpu mmiri dị irè iji dozie arụmọrụ ala na -adịghị ala na ịdị mma adịghị mma nke nnukwu okwute siri ike na ụfọdụ ihe mgbagwoju anya.
Atụmatụ na nlele
Njirimara nke Valveless DTH Hammer:
Ugboro ugboro na -emetụta oke na ntinye elu;
2.Low ikuku ikuku na nchekwa mmanụ;
3. Ọ dịghị ezumike iyuzu tube;
4.Simplicity of design and Easy Service.
Osote: Down Hole Drill SD160F
Mkpanaka mkpanaka 114mm
Mkpanaka mkpanaka 89mm Top Hammer
Mkpanaka mkpanaka 89mm dị elu nwere ogologo 3m
Down The Oghere Hammer
Ala Iji Hole Hammer
Ogo dị elu Top Hammer Drill Rod
Mkpanaka mkpanaka Top Hammer
Top Hammer Drill Rod China Onye na -emepụta ihe
Mkpanaka mkpanaka kacha elu emere na China